Ngemva kokushiya iqembu le-SEREBRO eminyakeni embalwa eyedlule ngenxa yomndeni, u-Elena Temnikova kancane kancane ubuyela ebhizinisini lokubonisa. Umculi wenza umsebenzi we-solo futhi uhola ngokugcwele ikhasi lakhe kwinethiwekhi ethandwa ngu-Instagram. Inkanyezi ishicilela njalo izindaba zakamuva kumabonakude akhe - abalandeli bakaTemkova bafunda "isandla sokuqala" futhi mayelana nezinhlelo zakhe zokudala, nokuthi ngabe uSasha ukhula kancane kangakanani, futhi mayelana nenye inkanyezi, futhi mayelana nezintandokazi zakhe.
Izolo ku-Instagram Elena Temnikova kwakukhona isithombe sezinyawo zakhe ezintsha. Buyekeza isitayela sakhe sokunikezela. Ngesikhathi esifanayo uTynikova waziqhenya ngokuthi uhlale enezinto ezipholile kakhulu:
I-stylist yami inezinto ezipholile kakhulu, njengaso sonke isikhathi ekuqaleni. Ngokufanayo, nami ngine-😈
Abalandeli baka-Elena Temnikova abakwazanga ukubonga amahlumela "abapholile" abaculi
Mhlawumbe amabhuzu amade, avulekile angabonakali kahle, kodwa ababhalisile baka-Elena Temnikova babethuswa kakhulu yizicathulo ezinjalo. I-Fallovers yabuza ukuthi umlingisi womculi wayengowokuqala "ukubamba" into enjalo imfashini. Iqiniso liwukuthi abasebenzi baseHollywood TV uKim Kardashian babenezinyawo ezinjalo isikhathi eside, ngakho-ke akungabazeki ukuthi lo mnothi we-stylist uTimkova uye wafinyelela inkanyezi yombukiso we-TV.
Lo mzuzu abalandeli baseRussia abaculi abahluleka ukuphawula emazwaneni:
I-9286lol Ku-stylist yakho? I-Kardashian ibilokhu igqoke izinto ezinjalo isikhathi eside
Kodwa-ke, abahlaziyi abaningi abazange bamangalise umzuzu lapho u-Elena Tatnikova ongenamathele alahlekelwa yithemba ngemuva kwemfashini, kodwa iqiniso lokuthi lezi zicathulo zibukeka sengathi ziyize futhi zimbi. Ama-Fallovers ashiye ezingxoxweni zekhasi le-Temnikova ngamakhulu amazwana we-snide futhi welule umculi ukuthi asuse amabhuzu kude:
yaolya92 Lokhu, yebo, kuyisiqalo, kodwa akusihle
tatsianabaranouskaya Yiziphi izinhlobo zezinyawo eziyizinhlanzi?
lisi4ka42 Ama-boot Anti-cellulite. Ngokushesha wazisa ukuthi imilenze yabo iba njani))))
olia_alenka Gqoka up amaphakheji ezinyaweni zomuntu odumile futhi konke! Isitifiketi soshokolethi, inkanyezi egqoke izikhwama ezithakazelisayo. Khombisa ibhizinisi isilwane esinjalo, sihlekisa kakhulu, siyathandeka kakhulu.
U-Elena Temnikova akazange aphendule ngokugxeka ku-Instagram yakhe. Mhlawumbe, umculi manje usezinqumele yena ngokwakhe - "amabhuzu amahle, kumele uthathe!" 😅
Imishado ngeke ibe? Emabhayisikobho bathi uPaulina Andreeva ushiye iFedor Bondarchuk
UJared Leto wathandana nomhlobo waseRussia oneminyaka engu-20 ubudala?
U-Ksenia Sobchak ubeke amazwana ngesimanga esikhwameni seZemfira eVilnius
URustam Solntsev utshele ngokulwa noTarasov, no-Olga Buzova bacela ukuthethelelwa kumama
U-Yana Rudkovskaya no-Evgeni Plushenko babeseCuba ngaphansi kwamazita angaphandle
Ukuqhuma emigwaqweni yaseSt. Petersburg - Buzova noMakarevich futhi phakathi nendawo yokuhlaselwa
Iresiphi yokudla ukudla kweKhisimusi
Ukuthembeka egameni noma izithembiso ezingenalutho
Umuntu wamaphupho ami
Utamatisi obomiswe ngelanga kuhhavini le-microwave
Hlobisa kusuka emahlathini aseBrussels
Isiphi isilwane esilungile kuwe
Yini i-liposuction engeyona yokuhlinzwa?
Amakhekhe nge-raspberries ne-ricotta
I-Risotto ene-cocktail cocktail
Angithandi umfana, kodwa ngihlangana. Yini okufanele ngiyenze?